Banyere Anyị - Dongguan Xiechuang Co.Ltd
Anyị factory na-pụrụ iche na mmepụta na ahịa nke carbon eriri efere, carbon eriri ịkpụzi ngwaahịa, carbon eriri akpa, CNC aluminum alloy elu kpọmkwem akụkụ, carbon eriri CNC nhazi akụkụ, unmanned ugbo elu carbon eriri, aluminum alloy akụkụ, carbon eriri ekara ngwaahịa, carbon CNC nhazi, nile di iche iche nke ngwaike na ọkụ mkpuchi nhazi akụkụ.
The ngwaahịa na-bụ-eji na nkenke akụkụ nke akpaaka ngwá, unmanned ụgbọelu akụkụ, drone uav okpokolo agba, ụdị ụgbọ ala, carbon eriri handicrafts, carbon eriri ekara akụkụ, carbon eriri ngwa, n'ibu shrapnel, egwuregwu na ngwa, n'elu mma, ngwá electronic, ígwè na ọkụ ngwaike na ndị ọzọ ọkụ industries.We etinyere abụọ mepụtara Ikike nchọpụta Kemịkalụ na 16 ọhụrụ technology nchọpụta Kemịkalụ na 4 The ọdịdị nchọpụta Kemịkalụ ruo 2018. anyị esesịn nwetara 20 Ikike nchọpụta Kemịkalụ na natara a patent akwụkwọ, mgbe anyị na-etinyere maka a mba elu-tech ụlọ ọrụ.
Mmepụta ebe e ụba 800 square mita, ngwaahịa mma e mma nke ukwuu, anyị malitere uka na-emepụta pụrụ iche carbon eriri ihe FPV.
Foreign Trade Department bụ oruru, anyị na 4 patent na ụghalaahịa nke carbon eriri product.Our ngwaahịa na-exported na ihe karịrị 20 mba n'ụwa dum.
Anyị meriri kwa afọ TOP 20 enterprise nke ọhụrụ ihe ụlọ ọrụ na ezi ihe onwunwe nhọrọ eme na China.
Anyị abuana ke 19 omume ntụrụndụ Expo CHINA , Asia Pacific kasị ukwuu na kasị akpa nlereanya ọkachamara event.There ndị fọrọ nke nta ka 60,000 ọbịa ụbọchị atọ ngosi, na anyị carbon eriri ngwaahịa dọtara ọzọ na ndị ọzọ ọkachamara na-azụ ahịa.
Anyị nwere ike ime iche iche nke carbon eriri ngwaahịa na elu ina, elu standards.Personalized ngwaahịa CNC ịkpụ dị ka ahịa si drawings.We enye akpụ, egweri, mkpọpu ala, CNC nhazi onye-nkwụsị ọrụ.
Anyị na-erube isi "àgwà mbụ, ọrụ na-abara, nwee ezi uche price," na elu àgwà, oru oma, ngwa ngwa ozi iru ogologo oge mmekọrịta na bụla customers.Continuing ka mma ngwaahịa na ọrụ anyị, na-aga n'ihu na anyị na ndị ahịa na iru merie-mmeri n'etiti anyị na ahịa.
Mgbe afọ nke technology ìgwè na mmepe, anyị ụlọ ọrụ emewo etinyere maka ihe karịrị 10 patents.The esonụ bụ ihe ndị ISO asambodo na akụkụ nke nchọpụta Kemịkalụ anyị nwetara ihe karịrị afọ, nke ISO asambodo na carbon ugogbe anya maka anwụ e nwetara na 2016, ndị ọzọ carbon ngwaahịa nchọpụta Kemịkalụ e nwetara na 2017.
Carbon Fiber efere